mairie-antananarivo – Boriboritany Voalohany : Kifafa 3
Boriboritany Voalohany : Kifafa 3
auteur 23 febroary 2017
Taorian’ny hetsika KIFAFA 1 teny Andavamamba Anjezika sy ny KIFAFA 2 teny Andohan’Analakely – Soarano dia notanterahina ny alarobia faha 22 Febroary 2017 vao maraina indray ny KIFAFA 3. Hetsika izay niarahana tamin’ireo ekipan’ny Boriboritany Voalohany notarihan’ny Delegeny Andriamatoa RAZAFINDRATSIMA Ndremahery Marie Gérard ; ny Vice Présidente Assemblée Nationale Hanitra RAZAFIMANANTSOA, Ireo rantsa-mangaika avy eo anivon’ny Kaominina (Polisy Monisipaly, Polisin’ny tsena, mpamafa lalana..), ireo mpivarotra (Petite Vitesse, Ambalavao Isotry, Modrain) ny RF2 (Fokontany Ampefiloha, Ambalavao, Ampatsakana, FIATA ),… ary ny tena nanamarika ity androany ity dia ny fandraisan’anjaran’ny Tily izay notarihan’ny filoham-paritanin’ny Tily Analamanga Afovoany ny Zoky RANDRIANAIVONIRINAHARISOA Radomanana.
Araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriborintany Voalohany, Andriamatoa RAZAFINDRATSIMA Marie Gérard dia : « mitohy hatrany ny asa fanadiovana ny tanàna araka ny toromarika izay nomen’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra, ary tsy mitsahatra ny manao ny fanentanana ny mponina izahay mba samy ho tonga saina sy ho tompon’andraikitra amin’ny fanadiovana satria tsy vitan’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo irery ihany ny fanadiovana ». Anisan’ny zava-dehibe ihany koa hoy hatrany ity Delege ity ny fandraisan’anjaran’ny mponina tsirairay.
Nandray anjara mavitrika nandritra ity hetsika fanadiovana ity ihany koa ry zareo Tily Analamanga afovoany. Araka ny nambaran’i Zoky Radomanana RANDRIANAIVONIRINAHARISOA dia : « nirotsaka nandray anjara tamin’ny fanadiovana izahay androany 22 Febroary 2017 mba hanamarihana ny fankalazana ny nahaterahan’ny mpanorina ny skoto dia i Baden Powel » efa fanaon’ny Skoto ihany koa ny hetsika fanampiana fiaraha-monina toy izao hoy hatrany ity filohan’ny Tily Analamanga Afovoany ity. Niisa 80 teo ho eo ry zareo no tonga nanampy ny Boriborintany voalohany tamin’izao fanadiovana izao niampy ireo solontenan’ny Tily avy any Korea.
Vina manaraka ny hanatanterahana ny KIFAFA andiany faha 4 izay hatao ny 26 Martsa ho avy izao eny Ambohijatovo ka hatreny Anosy.
Foara eran-tany eto Madagasikara andiany faha 12
Fanadiovana Mahazo – Ampasapito
Hetsika “FARITRA MADIO” Boriboritany fahaefatra
Fanadiovana Boriboritany Fahadimy
Vision de la Ville	Tanà, Ville moderne et agréable
Vaovao farany	Foara eran-tany eto Madagasikara andiany faha 12
Fanalana 4-mi sy fanadiovana tanàna
Copyright © 2014 - CUA. DSI-2014